सुहागरात पछि किन फेरिन्छ तन्ना ? कारण सुन्दा सबै चकित ! - Lekbesi Khabar
सुहागरात पछि किन फेरिन्छ तन्ना ? कारण सुन्दा सबै चकित !
‘विवाहपछि जब उनले मेरो अगाडि कपडा खोल्न थाले तब म एकदमै डराएकी थिएँ।’ एलमीरा (नाम परिवर्तन) ले भनिन् । उनले अगाडि भनिन्– मैले आफूलाई धेरै सम्झाउने कोशिश गरेँ। विवाहपछि यो सबै हुन्छ नै।
तै पनि मेरो मनले शान्ति पाएन। त्यो बेला मेरो दिमागमा के आयो भने अब मैले पनि आफ्नो कपडा उतार्नुपर्छ ।’ एलमीरा २७ वर्षकी भइन् र उनले भर्खरै मात्र विश्वविद्यालयबाट आफ्नो शिक्षा पूरा गरिन्।
अहिले उनी दोभाषेका रुपमा काम गर्छिन्। उनी आमा आफ्नाी छोरीकालागि योग्य पति खोजेकी थिइन्। आमाको खुशीकालागि उनले विवाह गर्ने सहमति पनि दिएकी थिइन् ।
‘उनी हाम्रा छिमेकी थिए, हामी अलग थियौं। उनी धेरै पढालेखा पनि थिएनन्,’ उनले भनिन् । एलमीराले आफ्ना आमासँग धेरै पटक तत्काल विवाह नगर्ने बताएकी थिइन्। छोरीको कुरा आमाले आफ्ना नातोदारलाई बताइन् । नातोदारले एलमीराको कुमारीतवमाथि शंका गर्दै तत्काल विवाह गर्न दवाब दिन थाले। विवाहपछि एलमीराले पहिलो पटक यौन सम्पर्क पनि गरिन् ।
‘एंजी’ को भूमिका भनेको अनुवहीन बेहुलीलाई मानसिक रुपमा तयार गर्नु हुन्छ। त्यसपछि एंजीले विवाहको रात सकिएपछि ओछ्यानको तन्ना हटाउने हो । तन्नामा रगतको टाटो देखिएपछि विवाहको प्रक्रिया समाप्त हुन्छ ।
त्यसपछि मात्रै मासिनले नवविवाहित जोडीलाई बधाइ दिन्छन् ।अजरबैजानमा महिला अधिकारको अध्ययन गरेकी शाखला इस्माइलका अनुसार त्यही कारण विवाहको राति सधैै रहस्यमय हुन्छ कि विहान तन्नाबाट के थाहा हुन्छ ? यदि तन्नामा रगतको टाटो देखिएन भने बेहुलीले समाजिक बहिष्कारसम्म खेप्नुपर्छ।
र, बेहुलीलाई माइतीमै फर्काउनेसम्मको चलन हुन्छ। त्यसपछि बेहुलीलाई सम्बन्ध विच्छेद गरेको रुपमा बुझिन्छ। र फेरि विवाह गर्न समस्या हुन्छ ।
अजरबैजानमा काम गर्ने मानवअधिकारवादी कार्यकर्ताका अनुसार देशको ग्रामीण इलाकामा यो चलन अहिले पनि जारी छ। कहिले काँही विवाह भन्दा पहिला बेहुलीको कुमारीत्वको जाँच केही विशेषज्ञ महिलाले गर्ने गर्छन्।
यो परम्पराप्रति केही अन्तर्रा्ष्ट्रिय संस्थाले विरोध पनि जनाएका छन्। गत वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघ र विश्व स्वास्थ्य संगठनले यो प्रथालाई खारेज गर्न अपील गरेका थिए ।
उनीहरुका अनुसार यो प्रथा महिलाकालागि अपमानजनक हो। यो प्रथा अहिले पनि विभिन्न २० मुलुकमा प्रचलित छ । डब्ल्यूएचओले आफ्नो वक्तव्यमा मेडिकल साइन्समा कुमारीत्वको कुनै स्थान हुँदैन।
यो केवल सामाजिक, सांस्कृति र धार्मिक मान्यतामात्रै भएको उल्लेख गरेको थियो । एलमीरा भन्छिन्–म निकै डराएकी थिएँ र पूरै रात सुत्न सकिन। यो कुराले उनलाई केही पनि प्रभाव परेन। उनी आरामसँग निदाए।’
‘विहान ती मानिस बेडरुममा तन्ना लिन आए। त्यो बेला मैले कुनै प्रतिक्रिया जनाइन्। किनभने यो किनै घृणित काम थियो। तर अघिल्लो रातको डरमाथि मेरो लाज हावी भएको थियो ।’ बीबीसी
४ असार २०७६, बुधबार १९:३० June 19, 2019
प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेट :प्रदेश नं २ विजयी
उनी अनि त्यो रात !